Waa maxay ROI ee Madax xanuunka? | Martech Zone
Waa maxay ROI ee Madax xanuunka?
Talaado, Juun 9, 2009 Sabtida, Juun 27, 2015 Douglas Karr
Shirkadaha softiweerka iyo softiweer ahaan shirkadaha adeegga waxay u maleynayaan inay iibinayaan tikniyoolajiyadda. Iibinta tikniyoolajiyaddu way fududahay… waxay leedahay cabirro, waxay qaadaneysaa meel bannaan, waxay leedahay astaamo la garan karo, xaddidan, awoodo… iyo kharashyo. Dhibaatadu waxay tahay in dadka badankood aysan iibsanayn tikniyoolajiyad.
Sii urur weyn oo iibin ah wakhti ku filan oo ay iyagu wax ka qaban karaan codsiga soo jeedinta galay istiraatiijiyad guuleysata oo faa'iido u leh shirkad. Waxaan u shaqeeyaa shirkad tartankeedu koowaad yahay (fikradayada rajadayada - ma ahan tayda) waa software furan. Haddii aan iibin lahayn softiweer qaali ah oo si toos ah ula tartamaya barnaamijyada bilaashka ah, ma haysan lahayn 300 + macaamiil. Sababta aan u koreyno waxay tahay runti ma nihin iibinta barnaamijka - waxaan iibineynaa natiijooyinka.
Rajooyinkeennu waxay aaminsan yihiin in qiimaha u guuritaanka bartayada wax lagu qoro ay tahay inay taasi ka dhalan doonto madax xanuun majiro wadada. Madax xanuun ma jiro waqtiga la joogo, madax xanuun majiro dayactirka, madax xanuun majiro arrimaha amniga, madax xanuun majiro - isku dheelitirka madax xanuun majiro waxqabadka, madax xanuun majiro waxbarista dadka isticmaala, madax xanuun majiro maxaa yeelay way adagtahay in la isticmaalo… iyo waliba intaba madax xanuun majiro laga soo bilaabo guuldarada.
Malaha tartankeena dhabta ah waa Tylenol!
Filashooyinka qaar ayaa u riyaaqa fursada madax xanuun… taasi waa caadi… halkan uma joogno iyaga. Waxaan doorbidi lahayn inaan lashaqeyno macaamiisha xoogga saaraya natiijooyinka. Natiijooyinka sida lagu qeexay iyagama, us.
Mar kasta oo shirkaddaadu maalgelin ku samaynayso tikniyoolajiyadda, maahan qalabka iyo softiweerka (waa ka xumahay injineerada!) Inay iibsanayaan - si kasta oo ay u qabow yihiin. Waxa shirkadaadu runti maal gasho waa dadka hortiisa iyo gadaashiisa sheyga. Shirkaddaada ayaa maalgelinaysa iibiyaha ay ku kalsoon yihiin. Shirkadaadu waxay maalgalinaysaa ganacsadaha bilaabay shirkada aad ku ogtahay hogaamiye ahaan. Shirkaddaadu waxay maalgelin ku samaynaysaa dadka - dadka xalliyay dhibaatada kugu sii haynaysa madax xanuun.
Hal macmiil oo ka shaqeeya waaxda dawladda ayaa dhowaan ii sheegay:
Doug - Waxba igama gelin ROI. Waxba igama gelin inta lacag ee dalabkaagu naga dhigi karo. Wax dan ah igama gelin waxyaabaha igu soo kordha. Waxba igama gelin tiknoolajiyadda. Sababta aan shirkadaada lacag u siiyaa waxay tahay inaad meesha ujoogtid inaad kajawaabtid taleefanka ama emaylka markii aan su'aal qabo… adiguna aad ogtahay jawaabaha. Sii wad inaad ka jawaabto taleefanka oo aad i caawiso waanan isku dhejinaynaa. Jooji ka jawaabista taleefanka waxaanan helayaa qof kara.
Tani waa sababta adeegga macaamiisha uu qayb muhiim ah uga yahay bilowga tikniyoolajiyadda weyn. Waxba igama gelin sida codsigaagu u qabow yahay… markii aad bilowdo inaad macaamiishaada u sheegto waxaad tahay ma awoodo ka caawi iyaga, ha ka filin inay saxeexaan cusboonaysiinta (marna ha ka xumaanin!). Macaamiishaadu waxay rabaan guul waxayna kugu kalsoon yihiin inaad iyaga siiso. Waxaad dhaantaa inaad dhagaysato oo aad ujawaabto. Xitaa ka sii wanaagsan - waa inaad si firfircoon u dhaqaaqdaa si aad u dhisto guusha macaamiishaada.
Xitaa barnaamijka softiweer ahaan ee ah adeegga Adeegga, shirkaduhu waxay ogaadeen in aysan ku qarin karin bogga taageerada macaamiisha ama saldhigga aqoonta… ama ka sii xun, oo ah madal macaamiil. Macaamiisha SaaS waxay u baahan yihiin inay fahmaan sida si buuxda looga faa'iideysto xalka ay maalgashadeen si loogu guuleysto. Taasi waxay u baahan tahay shaqaale karti leh, khibrad leh oo fahmaya waxa ay u baahan tahay.
Hogaamiyayaashani waxay fahmayaan wadada ugu yar ee iska caabinta, waxay fahmayaan sida loo aqriyo macaamiisha oo loo arko inay yihiin rajo weyn oo xagga koritaanka ah ama markhaatiyada macaamiisha… intabadan waxay fahmaan sida loola macaamilo macaamiisha shaqsiyan. Uma baahna himilooyin aragti gaaban oo caqli-gal ah, carqaladeynta geeddi-socodka ee iska indhatiraya guusha macaamiisha, ama maamul-xumo ka sii darran markii kheyraadku hore u maqnaa. Waxay u baahan tahay shaqaalaynta dadka aad ku kalsoon tahay, iyaga oo u oggolaanaya inay go'aanno waaweyn ku gaaraan magaca shirkadda, iyo ka saarista dhammaan caqabadaha si ay ugu adeegaan macaamiisha si wax ku ool ah (iyo faa'iido leh).
Ma siineysaa macaamiishaada guul? Mise shaqaalahaaga ayaa iyaga uun siinaya madax xanuun badan?
Tags: delivrageesrankSuuqgeynta Mobilada iyo Mashiinkabartilmaameed aan faa'iido doon ahaynprwebWarbixinta Bulshada
Muxuu Yahay Ballaaran Bogga Websaydhka?
Bixiso $ 299 oo Gudbi Goobtaada Yahoo?